Huawei Archives — Anycall Mobile
120Hz OLED Display, Kirin 985, 64MP Quad Cameras, 66W Fast Charging တို့နဲ့ပွဲထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ Nova 8 ၊ Nova 8 Pro
ဒီနှစ်အစောပိုင်းလောက်တုန်းက Huawei အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကြီး Nova Series ထဲက Nova7Series အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Nova7Series ထဲမှာဆိုရင် Nova 7i, Nova…
Huawei ဖုန်းတွေမှာGoogle Service တွေကို Shortcut ထုတ်ပြီး ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
Huawei ဖုန်းတွေမှာ Google Service မရတော့တာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ၊။ ဒီနေ့မှာတော့ Google Photo, Google Drive, YouTube, Gmail, Maps အစရှိတဲ့ Google Service တွေကို Huawei…
EMUI 11 ကို Huawei ရဲ့ ဘယ်ဖုန်းတွေမှာ ရလာမှာလဲ?
2020, September 10 ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားတဲ့ Huawei Developer Conference (HDC) မှာတော့ EMUI 11 ရလာမယ့် Hwawei ဖုန်းမော်ဒယ်တွေကို ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ EMUI 11 မှာ ဘာတွေပိုကောင်းလာမှာလဲ?…
Huawei အနေနဲ့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းလောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ Nova7Series ထဲက Nova 7i ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ April အရောက်မှာတော့ Nova7SE, Nova 7, Nova…
ဒီနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက Huawei အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Nova 7i ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး April အရောက်မှာတော့ Nova7SE, Nova 7, Nova7Pro တို့ကိုထပ်…
Huawei အနေနဲ့ မနေ့ကတုန်းက Smart Life event 2020 ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Huawei ရဲ့ Mate 40 Flagship Series အသစ်ကို တရား၀င်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Mate 40…
Huawei Mate 40 Pro ရဲ့ ပုံတွေထွက်ပေါ်လာ
Huawei အ‌နေနဲ့ လာမယ့် အောက်တိုဘာ 22 ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ Mate 40 Series အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထုံစံအတိုင်း ဖုန်းတွေထွက်လာဖို့ အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့ အမျှ ဖုန်းတွေရဲ့ ပုံတွေနဲ့ Specs တွေထပ်ပေါက်ကြားလို့လာခဲ့ပါပြီ။ အခုပေါက်ကြားလာတာကတော့Mate…
Huawei Mate40 Series ကိုတွေ့ရ ‌ေတာ့မယ့် အောက်တိုဘာ ၂၂
Huawei ကတော့ သူတို့ရဲ့ Mate Series ထဲက Mate 40 series ကို လာမယ့်အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့ တရား၀င်ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဒီမိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့ Youtube, Facebook နဲ့ Twitter တို့မှာ…
အောက်တိုဘာလကုန်လောက်မှာ Mate 40 Series ကိုစတင်ရောင်းချလာမယ်
လာမယ့် အောက်တိုဘာလ၀က်မှာ Apple ရဲ့ iPhone 12 Series ၊ OnePlus ရဲ့OnePlus 8T တို့ကို တွေ့လာရဖို့ကသေချာသလောက်ရှိနေတာမို့လို့ ဒီ အောက်တိုဘာလဟာ ရင်ခုန်စရာကောင်း‌တဲ့လလို့ပြောလို့ရနေပါပြီ။ နောက်ထပ် Huawei…
Foldable Smartphone Huawei Mate X2 ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ??
Huawei အနေနဲ့ လက်ရှိ Foldable ဈေးကွက်ထဲမှာ Mate X ၊ Mate Xs တို့နဲ့ အတူနေရာယူထားပေမယ့်လည်း Samsung နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် Huawei ရဲ့ Foldable ဖုန်းတေ‌ွဟာနည်းနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုထွက်လာတဲ့…
Huawei ကတော့ သူတို့ရဲ့ Nova Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Nova 8 Series ကို ၂၀၂၁ အစောပိုင်းလောက်မှာမိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလအစောပိုင်းတုန်းက Really Asen Jun ဆိုတဲ့ Leaker တစ်ဦးက Nova…
Nova75G ဆိုတဲ့ Premium ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်း…
Huawei အနေနဲ့ မကြာသေးခင်က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွက် Nova7Series ထဲက Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ နောက်ထပ် Nova7ဖုန်းတစ်လုံးဟာ မကြာခင်မှာဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Nova…
October လလယ် လောက်လမှာထွက်လာမယ့် Mate 40 Series
အရင်နှစ်တုန်းက Huawei အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Mate 30 Series ကို စက်တင်ဘာလမှမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာထွက်လာမယ့် Mate 40 Series ကတော့ US ပြဿနာတွေကြောင့် ဒီ စက်တင်ဘာလမှာ ထွက်လာနိုင်ခြေမရှိတော့ပါဘူး။ အခု Winfuture.de…
Huawei အနေနဲ့ Europe မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Seamless AI Life Launch event မှာ သူတို့ရဲ့ IoT ( internet of things) ပစ္စည်းအသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Huawei Watch GT2…
66W Fast Charging နဲ့ ထွက်လာမယ့် Mate 40 Series
Huawei ရဲ့ Mate Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ Mate 40 Series ဟာ October လကုန်လောက်မှာထွက်ရှိလာတော့မှာကိုအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Mate Series တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Mate 40 Series မှာ အသစ်အသစ်သောနည်းပညာတွေပါလာမယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ …